११ कम्पनीले बोलाए एजीएम: लगानीकर्ताको हातखाली बनाउँदै यी कम्पनी, कुनको कस्ता एजेण्डा ? - Arthatantra.com
११ कम्पनीले बोलाए एजीएम: लगानीकर्ताको हातखाली बनाउँदै यी कम्पनी, कुनको कस्ता एजेण्डा ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सूचीकृत कम्पनीले अझै पनि साधारणसभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
कयौ कम्पनीहरु अझै साधारणसभाको सूचना जारी गरेर बसेका छन् । भदौ २४ देखि असोज १६ गतेसम्म साधारणसभा गर्न भन्दै ११ कम्पनीले सूचना जारी गरिसकेका छन् ।
भदौ २४ देखि असोज १६ गतेसम्म साधारणसभा गर्न लागेका सूचीकृत कम्पनीमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीदेखी जलविद्युत कम्पनीसमेत रहेका छन् ।
भदौ २४ गते श्री राम सुगर मिल्सको २५ औं साधारणसभा अर्पण ब्यांकेटमा हुन लागेको छ । यो कम्पनीले लगानीकर्तालाई लाभांश भने दिने छैन ।
यस्तै गोर्खाज फाइनान्सले २६ औं साधारणसभा होटल क्राउन इम्पेरियलमा भदौ २४ गते नै गर्ने भएको छ । वैशाख १६ देखि २४ गतेसम्म बुक क्लोज भइसकेको छ। यसले पनि लगानीकर्ताको हात खाली बनाएको छ ।
लगानीकर्तालाई १०.५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.५५ प्रतिशत नगद लाभांशसहित १ः०.३९ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्तावसहित अपि पावरले भदौ २५ गते साधारणसभा बोलाएको छ । भदौ १८ देखि २५ गतेसम्म बुक क्लोजको अवधि रहेको छ ।
अरुण कावेली पावरले पनि १७ प्रतिशत बोनस र ०.८९ प्रतिशत कर प्रयोजनको लागि नगद देखी १ः१ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्तावसहित भदौ २६ गतेलाई साधारणसभा बोलाएको छ ।
भदौ १५ देखि २५ गतेसम्म बुक क्लोज रहेको छ । यस्तै मुक्तिानाथ क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मुनाफाबाट १८ प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश दिने र एनएमबी क्यापिटलले आव २०७७/०७८ को मुनाफाबाट ३० प्रतिशत करसहित नगद लाभांश दिने प्रस्तावसहित असोज १ गते साधारणसभा बोलाएका छन् ।
असोज ३ गतेको लागि साधारणसभा बोलाएको ङादी ग्रुपले २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश र १ः२ को अनुपातमा हप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसको बुक क्लोज भदौ १८ मा सकिएको छ ।
रु रु जलविद्युत परियोजनाले असोज १६ मा गर्न लागेको साधारणसभाबाट आव २०७६/०७७ को मुनाफाबाट १०.५६३२ प्रतिशत नगद र आव २०७७/०७८ को मुनाफाबाट १० प्रतिशत बोनस र ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव लैजाने छ । असोज ७ गते बुक क्लोजको समय रहेको छ ।
यस्तै नेपाल फाइनान्सले भदौ २६ मा, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भदौ २६ मा बेष्ट फाइनान्सले भदौ ३० मा बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छन् । यी कम्पनीले लगानीकर्ताको हात खाली बनाउने भएका छन् ।
नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्तिपछि कायम चुक्ता पुँजीको १ः०.७० को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २१ सोमवार १०:२० मा प्रकाशित
अघिल्लाे जीवन विकास लघुवित्तले फेरि जारी गर्यो अत्यन्त जरुरी सूचना !